Marxaladaha hore ee hawsha, waxaad noo soo diri kartaa cabbirka ama sawirka mashruucaaga. Haddii aadan lahayn cabbir, waxaan ku bari doonaa sida loo cabbiro. Inta lagu jiro kalfadhigan, kooxda naqshadeeyeyaashu waxay kula xiriiri doonaan adiga ama injineerkaaga dhibaatooyinka xallinta
Qiimaha nidaamka jaranjaradaada sabaynaysa waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee jaranjarada aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaystirka ee aad doorato.
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamkaaga jaranjarada dul sabaynaysa ayaa wax -soo -saar ka samaynaya warshaddeenna Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad samaynta dhalooyinka si aan u awoodno inaan soo saarno qayb kasta oo jaranjaradaada ah.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Xarigga xarigga ayaa la gooyaa dhererka saxda ah ee aad u baahan tahay. Waxaan ka soo baxnaa treads-ka halka barxadda fidinta ay aadi doonto, oo xitaa waxaan horay u qodnaa godadka godadka treads-ka meesha saxda ah ee boosteejooyinka biraha.
Hore: Jaranjarooyinka Cagaaran ee Sifiican loo naqshadeeyay - Tallaabada Birta Hore ee Tallaabada Mono Stringer Staircase - ACE
Xiga: Tallaabada Birta Hore ee Tallaalka Mono Stringer Staircase
Jaranjarada sabaynaysa oo jaban
Sabayn Jaranjarada Xagasha
Jaranjarada Muquuninta sabaynaysa
Qiimaha Jaranjarada sabaynaysa
Jaranjarada Talaabooyinka Sabaynaysa
Jaranjarada sabaynaysa ee muquuninta ah